स्वास्थ्य सेवालाई सबैको पहुँचमा पुगाउने नगरपालिकाको नीति : नगर प्रमुख विष्ट
बडैपुरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नं. १३ मा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र महिलाहरुका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको छ । भीमदत्त नगरपालिका वडा नं. १३ वडा कार्यालयले महाकाली अञ्चल अस्पतालको सहयोगमा फिस्टुला र पाठेघर खस्ने बिरामीको स्क्रिनिङ्ग तथा उपचारका लागि शिविर आयोजना गरेको हो । बडैपुर स्थित सिद्धनाथ माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणमा सञ्चालन गरिएको शिविरमा वडा नं. १३ का सहित छिमेकी वडाका वासिन्दाले स्वास्थ्य सेवा लिनु भएको छ ।
भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले शिविरको उद्घाटन गर्दै स्वास्थ्य सेवालाई सबै नागरीकको पहुँचमा पुगाउने नगरपालिकाको नीति अनुसार शिविर सञ्चालन गरिएको बताउनु भयो । नगर प्रमुख विष्टले भीमदत्त नगरपालिकाका सबै वडामा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरिने जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तह निर्वाचन पछि भीमदत्त नगरपालिकाको दुर्गम क्षेत्र खल्ला टुँडीखेलमा पहिलो पटक विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको हो ।
टुँडीखेलको गाउँघर क्लिनिकलाई चौविसै घण्टा सञ्चालन गरी स्थानीयलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन पछि गत वर्ष नगरपालिकाका सबै वडामा एकीकृत स्वास्थ्य अभियान अन्र्तगत शिविर आयोजना गरिएका थिए भने वडामा स्वास्थ्य चौकी समेत स्थापना गरिएका छन् । नगर प्रमुख विष्टले महाकाली अञ्चल अस्पतालका लागि गुरुयोजना बनाएर अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिसकेको बताउनु भयो ।
भीमदत्त नगरपालिका वडा नं. १३ का वडाध्यक्ष लाल बहादुर शाहीको अध्यक्षतामा गरिएको कार्यक्रममा कार्यपालिका सदस्य प्रताप तिरुवा सहित वडा सदस्य लगायतका सहभागी हुनु भएको छ । वडा अध्यक्ष शाहीले स्वास्थ्य संस्थामा गएर उपचार गराउन नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र महिलाहरुलाई लक्षित गरी शिविर आयोजना गरिएको बताउनु भयो ।
शिविरबाट तीन सय जनाले सेवा लिने अपेक्षा गरिएको छ । निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन हुँदा स्थानीय महिलाहरुले खुशी व्यक्त गर्नुभएको छ । महाकाली अञ्चल अस्पतालका डा. धिरज जोशी सहित स्वास्थ्यकर्मीले शिविरमा बिरामीहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुभएको छ । भीमदत्त नगरपालिका आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाई उपशाखाले शिविर सञ्चालनमा प्राविधिक सहयोग गरेको उपशाखा संयोजक भीम सिंह महराले बताउनु भयो ।
प्रकाशित मिति: सोमवार, चैत्र १८, २०७५, ०५:०४:००